हिमालय खबर | घुम्ती शिवीरको आयोजक बन्न ड्यालसका दुइ संस्थामा जुँगाको लडाइँ
प्रकाशित ५ बैशाख २०७८, आईतवार | 2021-04-18 11:09:15
ड्यालस (टेक्सस) – नेपाली दूतावास वासिङ्गटन डिसीले ड्यालसमा आउँदो महिना गर्न लागेको घुम्ती शिवीरको स्थानीय आयोजक को हुने भन्ने विषयमा स्थानीय दुई संस्थाहरुको विवाद चर्किएको छ ।
दूतावासले आयोजना गर्न लागेको शिवीरको स्थानीय आयोजक को बन्ने भन्ने विषयमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) टेक्सस च्याप्टर र नेपाली समाज टेक्ससबीच विवाद चुलिएको छ । एनआरएनए च्याप्टरले दूतावासबाट कार्यक्रम गर्ने औपचारिक पत्र आफूले पाएको भन्दै अरु संस्थालाई साथमा लिएर कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । उता नेपाली समाज टेक्ससले भने पहिलेनै दूतावासले स्थानीय आयोजकको जिम्मेवारी वहन गर्न आग्रह भएकोले आफूले सबै संघसंस्थासँग मिलेर कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।
आउँदो मे १४ र १५ तारिक नेपाली दूतावास डिसीले स्थानीय नेपाली समुदायका लागि आवश्यक पर्ने सेवाहरु (नयाँ पासपोर्ट, नवीकरण, भिसा, एनआरएनए कार्ड, अधिकृत वारेसनामा, कागजात प्रमाणिकरण) प्रदान गर्नेगरि शिवीर राख्ने योजना बनाएको छ । सोही अवसरमा आर्थिक कुटनीति विषयमा समेत छलफल कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
त्यस अनुसार सहकार्य गरेर शिवीर सञ्चालन गर्न एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष सुनील साहलाई पत्र समेत पठाइसकेको छ । साहले सो कार्यक्रम च्याप्टरले गर्दा प्रभावकारी हुने भन्दै च्याप्टर अध्यक्ष राजेश अर्याललाई जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।
‘दूतावासले एनआरएनसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम गर्न प्रस्ताव गरे अनुसार हामीले नेपाली मन्दिर अर्भिङगमा हल बुक समेत गरिसकेका थियौँ’ एनआरएन टेक्सस च्याप्टर अध्यक्ष राजेश अर्यालले भने । फोनबाट बुक गरिसकेको हललाई भोलीपल्ट नेपाली समाज टेक्ससले सोही कार्यक्रम आफूले गर्ने भन्दै हल बुक गरेपछि दुई संस्थाबीच विवाद चरमोत्कर्शमा पुगेको छ ।
‘नेपाली समाज टेक्ससले पहिलेनै घुम्ती शिवीर गर्ने निर्णय गरिसकेका थियौं । सोही अनुसार दूतावासले यहाँ कार्यक्रम राख्ने भएपछि हामीले कार्यक्रमा गर्न हल बुक गरेका हौँ’ नेपाली समाज टेक्ससका उपाध्यक्ष राजेन्द्र वाग्लेले भने । उनले एनआरएनसँग मिलेर शिवीर गर्न आफूहरुलाई कुनै समस्या नरहेको बताए ।
दुई संस्थाबीच कस्ले कार्यक्रम गर्ने र जश लिने विवाद बढ्दै जाँदा कार्यक्रमनै नहोला भन्ने चिन्ता स्थानीय नेपाली समुदायले गर्न थालेका छन् । ‘कार्यक्रम गर्ने, समाजसेवा गर्ने भन्दा पनि भरखरै आएका नयाँ राजदूत डा. युवराज खतिवडासँग को नजिक हुने र कस्ले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विवादको जड हो’ दुई संस्थाबीच उत्पन्न विवादलाई नजिकबाट हेरिरहेका स्थानीय एक नेपालीले भने । राजदूतसँग नजिक हुने र अवैतनिक वाणिज्यदूतका लागि लबीङ्ग गर्नका लागि यो विवाद भएको समेत उनले खुलासा गरे ।
दुबै संस्थाहरु प्रवासमा आएका नेपालीहरुको हितका लागि काम गर्ने लक्ष्य लिएर स्थापना भएका हुन् । एनआरएनएले दोहोरो नागरिकता, नागरिकता कार्ड लगायतमा पैरबी समेत गर्दै आएको छ । नेपाली राहदानी नवीकरण गर्न, हराएको अवस्थाका अर्को बनाउनका लागि टेक्ससका नेपालीहरु तीनघण्टाको हवाई उडान गरेर डिसीसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । तर आफु बसेकै राज्य, शहरमा सोही प्रकारको सेवा दिन आयोजना हुन लागेको घुम्ती शिवीर भने दुई संस्थाको विवादले स्थगित हुने संभावना समेत बढेको छ ।
दूतावास स्रोतका अनुसार दुई संस्थाका पदाधिकारीबीच त्रिपक्षीय कन्फरेन्स कलमा समेत विवाद भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार राजदूत डा. खतिवडाले स्थानीय नेपालीमुलका व्यबसायीहरुसँग पनि अन्तरकृयाका लागि चासो देखाएर कार्यक्रम गर्ने इच्छा गरेका छन् । सोही अनुसार नेप्लिज अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सले साँझ अन्तरकृया सहित रात्रीभोजको कार्यक्रम तय गरिसकेको छ ।
एनआरएनए र नेपाली समाज टेक्सस दुबैलाई मिलेर कार्यक्रम गर्न स्थानीयले सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन एउटा संस्थाले गरेमा सभापतित्व अर्को संस्थाको तर्फबाट गरेर विवादरहित रुपमा कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
तर यो समाचार तयार पार्दासम्म दुबै संस्थाहरु आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् । दुबैले ‘मिलेर कार्यक्रम गर्ने हो’ भनेपनि भित्री रुपमा भने आफैँलेमात्र गर्न पाए हुनेथियो भन्ने आशय देखाइरहेका छन् ।
नेपाली समाज टेक्ससले एनआरएको चुनाव घोषणा भैसकेको अवस्थामा संस्थाले कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नमिल्ने भन्दै केही पदाधिकारीहरुले अभिव्यक्ति दिँदा दुई संस्थाबीच विवाद बढ्न पुगेको बताइएको छ ।
एनआरएनको तर्फबाट चाँहि दूतावासले कार्यक्रम गर्नका लागि इमेल समेत पठाएर स्थानीय अन्य संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको हुँदा त्यही अनुसार अघि बढ्ने जनाएको छ । ‘हामी मिलेर कार्यक्रम गर्ने भनिरहेकै छौँ । नेपाली समाज पनि कार्यक्रमको एउटा पार्ट हो । तर उहाँहरु (नेपाली समाज टेक्सस) ले जानकारी नै नदिई कार्यक्रमका लागि हल बुक गर्नुले असहज परिस्थिती बनेको हो । यसलाई हामी सुल्झाउँछौँ’ एनआरएनए च्याप्टर अध्यक्ष अर्यालले भने ।
सतही कारण जे देखिएपनि भित्री कारण भने कार्यक्रमको सञ्चालन र सभापतित्व गर्ने विषयलाई लिएर दुई संस्थाबीच देखा परेको विवादलाई स्थानीय नेपाली समुदायका अगुवाहरुले भने ‘लाजमर्दो अवस्था’ का रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । यो विवादमा नेपाली समाज टेक्सस एकातिर र एनआरएनए एकातिर छन् ।
ड्यालसको कार्यक्रम सकिएपछि मे १६ र १७ तारिक यस्तै कार्यक्रम टेक्ससको अर्को शहर ह्युस्टनमा गर्ने गरि कार्यक्रम तय गरिएको छ ।